Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali-Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.
Malunga nomgaqo-nkqubo wokubuya weentsuku ezingama-30:
Ukuba ufuna ukufumana ulwazi lokubuya, nceda unxibelelane nathi kwiintsuku ezingama-30 emva kokufunyanwa.
Ngesicelo sokubuyisa, nceda ufunde le ngcaciso ilandelayo:
1. Ukuba umshicileli akanakuvulwa, okanye onakaliswe xa kusiwa, okanye thina iimpahla / iimveliso asihambelani, ungangenisa isicelo sokubuyisa / sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30.
2.Malunga neemveliso zethu zomshicileli we-3D, sinika iwaranti yonyaka omnye kuwo onke amalungu aphambili kubandakanya ibhodi yomama, imoto, umboniso wekhusi kunye nebhedi eshushu. Izipho, izincedisi kunye namalungu abuthathaka awagutyungelwanga iwaranti
Nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi kwangaphambi kwexesha ngaso nasiphi na isicelo sokubuyisa umonakalo.
Ukuba ayisiyomshicileli uqobo lwayo, asizukuthatha iindleko zokuhambisa. Kwaye ukuba umatshini ufuna ukubuyela e-China, nathi asizukuyithwala intlawulo enokubakho.
3. Ngaphandle kwezizathu zokuhamba, ukuba awuyifuni imveliso, uyala ngqo iphakheji, okanye ubuya ngezizathu ezizezakho emva kokuhanjiswa (kufuneka ubekwimeko entsha), kungafuneka uthwale umrhumo ocacileyo othunyelwe ngumthengisi kunye iindleko zembuyekezo yephakheji.
Ngaphambi kokubuyisela imveliso, nceda usinike umfanekiso wemveliso leyo.
Nje ukuba isicelo sokubuyisa samkelwe, kungathabatha iintsuku ezingama-25 ukuba sifumane imveliso kwaye siqhubekise ukubuyiselwa imali emva kokuba uyithumele kuthi le mveliso.
Yintoni eya TronHoo3D Yenza
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngemveliso yethu, nceda unxibelelane nathi kuFacebook okanye nge-imeyile, iTronHoo3D iya kufumanisa umba kwaye ikuphendule ngokukhawuleza.
Siza kukunceda usombulule ingxaki ngokukukhokela uhlaziye izixhobo zekhompyutha, ukubonelela ngenkxaso yeendlela okanye ukubuyisela izinto ezincedisayo.
Iwaranti yomatshini ihlala ingatshintshanga.
Eyongezwayo: i-motherboard, umlomo wombhobho, ibhodi yebhodi eshushu, umboniso, ibhodi ye-PCB, uyonwabele iwaranti yeentsuku ezingama-30 (iwaranti yesiqhelo yemini engama-30)
Qaphela: Izitikha zebhedi eshushu, imilomo, ibhedi enemagnethi kunye nezinye izinto ezingasetyenziswanga azigutyungelwanga iwaranti ukuba azibangelwa kukusilela komatshini
Ixesha lewaranti lingahluka ngokwemithetho nemigaqo yendawo.
Ukusetyenziswa kolwazi lomntu
Ngokufumana emva kwenkonzo yokuthengisa phantsi kwalo mgaqo-nkqubo, ugunyazisa iTronHoo ukuba igcine iinkcukacha zakho kubandakanya igama, inombolo yefowuni, idilesi yokuthumela kunye nedilesi ye-imeyile. Siza kulukhusela ulwazi lwakho.
I-TronHoo iqinisekisa ukuba ukubuyiselwa imali, ukubuyisela nokulungisa iwaranti kunokucelwa ukuba kuxhomekeke kule miqathango ilandelayo:
Iindleko zokuhambisa kufuneka zihlawulwe ngumthengi kwezi meko zilandelayo:
● Ukubuyisa iimveliso nangasiphi na isizathu ngaphandle kwesiphene esiqinisekisiweyo
● Ukubuyela ngengozi komthengi.
● Ukubuyisa izinto zobuqu.
● Izinto ezibuyayo zibanga ukuba neziphene kodwa zafunyanwa yiTronHoo QC zikwimeko yokusebenza.
● Ukubuyisa izinto ezinesiphene kuthumelo lwamanye amazwe.
● Iindleko ezinxulunyaniswa nembuyekezo engagunyaziswanga (nayiphina imbuyekezo eyenziwe ngaphandle kwenkqubo yewaranti evunyiweyo).
Yintoni omele uyenze ngaphambi kokufumana inkonzo yasemva kokuthengisa
Umthengi kufuneka anike ubungqina obaneleyo bokuthenga.
ITronHoo kufuneka ibhale ukuba kwenzeka ntoni xa abathengi besombulula ingxaki kwimveliso.
Inombolo yesiphene yento enesiphene kunye / okanye ubungqina obubonakalayo obubonisa isiphako iyafuneka.
Kungafuneka ubuyisele into kuhlolo lomgangatho.
Ubungqina obubambekayo bokuthenga:
Inombolo ye-odolo ekuthengweni kwe-Intanethi okwenziwe kwivenkile esemthethweni yeTronHoo